I-Series yeWorld Series yeHouston Astros ayiphumelelanga - Ukudlalwa Kwemlb
I-Astros yayinecebo, kodwa babengenalo ikamva
NgoLwesithathu, i-Astros iphumelele i-World Series, ikhupha i-Dodgers kwi-Doomsday vs. Superman uthotho oluqhekeze phezulu 10 lonke ixesha ngochulumanco nasekulandeleleni iinkokheli kuphela ngenxa yokuba ukubanjwa kukaHouston kwakungqongqo kuMdlalo wesi-7. Phakathi kwabadlali abancedisa i-'Stros ukuba iphumelele ngo-5-1 kwi-clincher yayiziinkwenkwezi ezisencinci kuthotho lwazo kunye nexesha lonyaka: UAlex Bregman, uLance McCullers, UCarlos Correa, kunye noMdyarho weHlabathi we-MVP uGeorge Springer, owaphinda wabuyela kwakhona ukutywina I-10 yeyona ilungileyo Uchungechunge lwasemva kwexesha lonyaka olwenziwe yi-Championship Win. Zonke ezine zazingumjikelo wokuqala wokuyila, iimveliso zeminyaka esezantsi eyandulelayo neyenze ukuba impumelelo ye-Astros. Isicwangciso esingqineke singathandwa kwizangqa ezingezizo ezesabatha ngexesha lale minyaka ingama-50 yokuphumelela-amaxesha kubonakala ngathi ayinakuphikiswa kwaye ayinakuphikiswa ngoku ekubeni isicwangciso sihlawule: Yiba mbi; lunga; phumelela Series World.
Ukuphumelela kwe-Astros wayenjalo waxela kwangaphambili, kodwa ayimiselwanga kwangaphambili. Kwaye nangona bakhile uluhlu olubonakala ngathi luza kubakho kwiintsuku zokufa kweeOctobers ezininzi ezizayo, ukuphatha esi sihloko njengesiqalo sobukhosi, njengoko abanye benzayo xa Amantshontsho ephelisa imbalela yabo kunyaka ophelileyo ngoLwesine, ichaza ubunzima be into eyenziwe nguHouston. Into eyenziwe yi-Astros kule veki yayinesibindi kwaye yayiqaqambile. Kodwa ayizange ibe yinto ezenzekelayo okanye eyenzelwe ukuba ibe yiyo, eyenza ukuba ikhunjulwe ngakumbi kwaye kufanelekile nge-champagne.
UGeorge Springer kunye nesona siGqweso siBalaseleyo kwiBhola ekhatywayo Imane yahlikihla indlela yabo eya kwisihloko sokuqala se-Astros
I-baseball yanamhlanje ingaphaya kweedynasties. Kwiminyaka eli-16 okoko umdlalo ka-Luis Gonzalez 7 waphelisa ukubusa kwe-Jeter-Rivera Yankees, iiklabhu ezintathu ziphumelele ukubuyisa umva, kwaye abanye abathathu baphumelele izihloko ezininzi kumaxesha angahambelaniyo, kodwa akukho mntu ubambene Uthotho lweHlabathi liphumelele.
Akukho qela ukusukela ngo-2000 elikhusele isihloko salo kuba i-post-Selig baseball yenzelwe ukubetha iintshatsheli kwibala labo. Kukho amaqela angama-30, mhlawumbi kunye ngaphezulu endleleni . Kukho imidlalo yokudlala okanye yokufa kunye nemijikelo emithathu yokwenene yokudlala. Kukho amanyathelo abekiweyo okunciphisa izikhewu zenkcitho phakathi kwamaqela kunye nokuzisa ibhalansi yokhuphiswano: irhafu yokunethezeka, kunye nokwabelana ngengeniso, kunye neekepusi (ezinzima okanye ezithambileyo) kwinkcitho kwintengiso yeamateur nakwamanye amazwe. Inkqubo nganye yeqela ihlakaniphile ngokwemigangatho yeshumi eyadlulayo, kwaye akukho qela linikezela ngokuphumelela, ngaphandle kokuba litshintshiselwano ngelahleko ezimbalwa kamva.
Sidlulile kumaxesha apho abona bantu bazizinhanha, abanetalente, okanye amaqela akrelekrele anokuthembela kuhambo oluya kumdlalo-xa indlela yayiqonde ngqo, kwaye nomda omkhulu weligi wawungazami ukukhuphisana ngoku okanye ucwangcisele ikamva kangangoko ibizama ukwenza umvuzo kwaye uphile ukuze udlale olunye usuku. Ukuba i-franchise iphumelele izihloko zokubuyela umva ngoku-makungabikho zintathu ngqo-ayizukuba ngenxa yokuba ikhuphe ngaphezulu okanye yagqwesa ukhuphiswano lwayo ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba amathuba ayethanda ukuSuku lokuVula. Iya kuba kungenxa yokuba iqela lizibeke ethubeni lokudlala umdlalo wokudlala ixesha nexesha, kwaye ubuncinci ubuncinci kula maxesha amaxesha izinto ziye zaphuka ngokuchanekileyo. Kula maxesha okudlala, iqela le-playoff-iqela, elikufutshane kakhulu esinokuza kulo ubukhosi liqela elihlala liphumelela ukwahlulahlula.
umxholo we-nier automata boss
I-World Series yalo nyaka ibingumdlalo phakathi kwamaqela amabini enze konke okusemandleni njengokukhusela indawo yabo kwi-postseason yekamva elibonakalayo-elikwi-baseball elifutshane eliphazamisayo. Itheyibhile yeBhola umbhali uRussell Carleton — omnye wabambalwa BP ababhali abo i-Astros ingekabaqeshi-bafumanisa ukuba ukusuka ku-2000-15, unxibelelwano phakathi kweerekhodi zonyaka zangoku zamaqela kunye neerekhodi zawo kunyaka olandelayo yayingu-.526, apho i-zero yayingazukumela ubudlelwane kwaye i-1 iya kuthetha ukuphindaphinda okugqibeleleyo; Iminyaka emibini iphumile, yawela ku .394, kwaye kwiminyaka emithathu yaphuma, yehla yaya ku-.196, ibhetele ngokungcono kunokungahleliwe.
I-Dodgers, emele eyona ngxoxo ibalaseleyo ye-baseball yokuba imali isabalulekile (kuba bekwazile ukuchitha iimpazamo ezibiza kakhulu ezenziwe ngurhulumente wangaphambili), benze impumelelo ibonakale ingaguquguquki kunokuba kunjalo kwiiklabhu ezininzi, ukuphumelela i-NL West iminyaka emihlanu elandelelanayo kunye nokuthumela eyona rekhodi ilungileyo ye-MLB ngeli xesha lonyaka eshiya isizathu esincinci sokucinga ukuba i-streak yabo isengozini. Nabo bayile kwaye bakhula kakuhle, benza ubuchule obuthile kunye nokusayina, kwaye bahlanganisa zombini isiseko esincinci, esinomona, nesilawulwa ngexabiso kunye nokuthembela kwengqondo engaphambili eofisini. Kodwa abaphumelelanga kwi-World Series ukusukela ngo-1988.
Kuya kufuneka ushiye i-netflix
I-Dodgers Blew Amathuba amaninzi okuphumelela i-World Series
Ukuba ii-Astros, okokuqala ngqa kwimbali ye-franchise, yenye into eyamkelekileyo yeqhinga lokuphikisana elalibazisayo ukuza kuthi ga ngoku. Nangona i-NBA i-Philadelphia 76ers ihlala ikhankanywa njenge-trailblazers ye-tanking, umphathi jikelele we-Astros uJeff Luhnow wayesebenze iinyanga ezili-18 ngelixesha kuqashwa uSam Hinkie. UHinkie, onemizamo engekavelisi irekhodi lokuphumelela eliqhelekileyo, wagxothwa ebutsheni bonyaka ophelileyo; ukuba ikhonkrithi ayincedileyo ekuphalazeni yakha yakha isiseko seqela eliphumeleleyo, uyakulibukela kude. I-Astros, kunye ne-Luhnow esasebenza nangoku, ayisiyiyo nje i-tanking craze esele isasazekile nakwezinye imidlalo, bayigqibelele kwitrayi yokuqala, befunxa i-jabs yabagxeki bamatanki bodwa de imeko yomdlalo-kunye nenkqubela-phambili yabo iikopi ezifana namathole.
Ekuvukeni kwempumelelo yamantshontsho kunyaka ophelileyo, ukuphumelela isihloko sasemva kwetanki ngoku kubonakala ngathi yinto eqinisekileyo, kodwa kukude nokukhiya. Ixesha elinikiweyo, lonke iqela elinetanki lokugcina ingqokelela yamathemba kufuneka liphinde lilunge, kodwa ayililo lonke iqela elinjalo eliya kuba likhulu-kwaye ayizizo zonke eziphumelelayo ziya kuphumelela i-World Series. Ubungqina boku Imidlalo eboniswe NgoJuni 2014 ukubikezela ukuba i-Astros yayiza kuphumelela isihloko se-2017 yayingengombono wokuba i-Astros iyakulunga iminyaka emithathu ezantsi kwendlela. Nangona ii-Stros zazisendleleni eya kuma-70 ephumeleleyo ehlotyeni, kwaye zivela zigqibezeleka ngakumbi kumaxesha adlulileyo, zazinonyaka omnye ziphumelele ikhadi lasendle; iziqwenga zazisele zikhona. Hayi, umxholo wawubambe kakhulu kuba wawuthetha ukuba inqanaba lokuxelwa kwangaphambili alikho.
YINTONI JINX ?? #ImbaliEyifunyenwe https://t.co/qKe7bLe3IN
- IHouston Astros (@astros) NgoNovemba 2, 2017
I-Astros yayineenqwelwana zokuqala zokukhetha, kodwa ukhetho lokuqala luhlala luhamba. (Nditsho ne-Astros ayikhange ikhethe ngokugqibeleleyo, ilahlekile ngo-2013 phezulu khetha uMark Appel noKris Bryant ebhodini.) Njengokuba iiCubs zazinobukrelekrele kwaye zinethamsanqa xa zaxhwitha uJake Arrieta noKyle Hendricks kude kweminye imibutho kwaye bazibukela bephumelela. okanye usondele ekuphumeleleni amabhaso amaCy Young, ii-Astros zombini zazinengqondo kwaye zinethamsanqa xa uDallas Keuchel waba yi-ace, naxa uJosé Altuve wajika waba yi-MVP ekhukhumeleyo, naxa uMarwin González waba ngumlindi. Nkqu noLuhnow ngekhe aqikelele ezo ziphumo xa wayefumana iAltuve kunye neKeuchel, okanye xa wathengisela uGonzález kwiiyure nje emva kokuqeshwa kwakhe. I-Astros iphumelele i-World Series kunye noCharlie Morton kwindunduma, iphosa 98 , Into nokuba uMorton mhlawumbi ngekhe ayicinge ukuba inokwenzeka ngo-2014.
into malunga nenkwenkwezi
Ukuze i-Astros-okanye naliphi na iqela-ukufikelela kweli nqanaba, uninzi lwee-swings zabo ezinkulu kuye kwafuneka zidibane, kodwa ezinye zeendlela zabo ezibonakala ngathi zincinci kuye kwafuneka ukuba zibe mikhulu ekubuyiseleni emva. Iimpazamo zabo-kwaye ewe, baye yenziwe izigqibo ukuba baya kufuna ukubuya-akunakuba buhlungu. Kwaye emva koko , Kanye Bakhe iqela elinokuphumelela rhoqo kwiinyanga ezintandathu eziqhelekileyo, kuye kwafuneka baphumelele kuthotho lweesampulu ezintathu, bebephulukene nazo kwinqanaba elithile. Isizwe saseWashington ndingangqina ukuba inzima kangakanani loo nto. Ngokunjalo namantshontsho e-Cubs, awongamele iiNats kulo nyaka we-NLDS kodwa awela kwiDodgers kumjikelo kamva, emva kokuchitha ixesha labo eliqikelelweyo-lokuba-ligunya lokulwa neBrewers ekucingelwa ukuba-mbi kwi-NL Central. Kwaye kunjalo naku-Astros ka-2016, ababelindelekile ukuba bakhe kwi-win win-card yabo ye-2015 kodwa endaweni yoko bahlala ngo-Okthobha.
Kwithiyori, ezi Astros kufuneka zibuyele kwiklasikhi kungekudala. Zine kuphela ii-Astros ezivela kuLuhlu lweHlabathi loluhlu ziiarhente zasimahla, kwaye akukho namnye kubo (uCarlos Beltrán, uCameron Maybin, uLuke Gregerson, noFrancisco Liriano) abanokuyilimaza kakhulu imbono yeqela le-2018 ngokushiya. Nangona iHouston yayinoncedo oluvela kwii-30-somethings ezinje ngoJustin Verlander, Yuli Gurriel, Josh Reddick, noBrian McCann, esi sihloko yayingesiyo eyokugqibela yokuphelisa iklabhu evala ifestile. Uninzi lweyona nto iphambili kwi-Astros ikufuphi okanye isondela kwincopho yayo, kunye nekamva labo abancinci be-sluggers babotshelelwe kweli qela kude kwikamva .
Elona nqanaba likhulu. UGeorge Springer ungumnini. #ImiSebenzi yeHlabathi pic.twitter.com/VjSLocFNRI
-MLB (@MLB) NgoNovemba 2, 2017
Ngoku ka I-Neifi , Uvavanyo lomdlali kunye nenkqubo yokuqikelela enelayisensi kumaqela amakhulu eligi, ixabiso elidityanisiweyo labadlali beAstros abaphantsi kolawulo lweqela, kuwo omabini amanqanaba amakhulu neligi, abancinci kunalo naliphi na elinye iqela, abadlula kwindawo yesibini amaIndiya. zizonke ngama- $ 244 yezigidi. (AbakwaDodgers bakwindawo yesithathu.) Uninzi lwelo xabiso luvela kubafana abakhulele ekhaya-abaqulunqiweyo kunye ne-signees yamanye amazwe-abanye babo bangaphambi kolawulo lwangoku. Ayikho enye iklabhu engafuni ukuba lapho zikhona i-Astros, kungekuphela ngenxa yemisesane abanayo ngokulandelelana kodwa ngenxa yamathuba abo okufumana ngaphezulu. Ngaphezulu kwelo, i-Astros 'payroll ngeli xesha lonyaka 17 , ke banokugaya ngaphandle ukuba bafuna njalo, ukugcina isantya kunye nokunyuka kwengeniso eqinisekileyo yokuvela kubukhazikhazi babo.
I-Astros lelinye lawona matyala acacileyo kwezemidlalo yesicwangciso esilungiselelwe kakuhle esenziwe kakuhle. Babonakalisile ukuba ukulahleka okwethutyana yenye yeendlela zokuphumelela. Kodwa nangona ikhosi yabo, njengaleyo yamantshontsho, yayichanekile, indawo ababesiya kuyo yayihlala inamathandabuzo — nangolwesiThathu, nanjengoko abaDodgers bevalele iimbaleki ezili-10 ezazinokungena ngemini eyahlukileyo. Kuba sakubona ukuvuselelwa kwe-Astros kusiza Kudala ngaphambi kokuba ifike, uloyiso lwabo luziva lwahlukile, kodwa iyafana nayo yonke iMidlalo yeHlabathi iphumelele: umsitho omuhle, ongenakwenzeka, kunye noxabisekileyo ongenakulindeleka ukuba ubethe kwindawo enye kunyaka olandelayo. Yiyo yonke into ebangela ukuba ii-Astros zibhiyozele namhlanje.
amaqanda epasika ngokwaphula kakubi
isikhokelo sokuyila isikhokelo
inethiwekhi yokuncokola indawo yokuqala
Eyona midlalo bhanyabhanya yomculo weDisney
Iifilimu zamanye amazwe ezilungileyo ze2017
Isipili esimnyama siyoyikisa